गरिबी र अशिक्षाको आगोमा पोलिएको लोकतन्त्र अधिनायकवादभन्दा कम हुन्छ र? ~ Khabardari.com
यो देशमा ७ सालमा प्रजातन्त्र आयो र १५ सालमा चुनाव भयो भन्ने सम्झँदा अनौठो लागेर आउँछ । ५० बर्षपछि त यस्तो गरिबी, उस्तै अशिक्षा छ । उबेला कस्तो थियो होला ?
के बुझेर हाल्छन् मान्छेले भोट ? गरिबी र अशिक्षाको आगोमा पोलिएको लोकतन्त्रको हालत के अधिनायकवादभन्दा उपल्लो हुन्छ ? पैसाले चुनाव जितेको नेता के जनताप्रति उत्तरदायी हुन बाध्य हुन्छ ?
हुन त स्वतन्त्र जनताभन्दा दलका दास धेरै छन् । मेरा कुरा कसले सुन्ला र !